Goobaha ugu fiican ee Bingo-ka ee Soomaaliya Julay 2022 | Bingo77
Goobaha bingo inuu u ciyaaro ee Soomaaliya
64 Bingo tigidhada & 10 dhigeeysa free 18 T&C
64 Tigidhada Free bingo & 10 dhigeeysa free 18 T&C
300% Bonus & 30 dhigeeysa free 18 T&C
40£ Bonus Welcome 18 T&C
liisanka khamaarka Curacao
50€ Cash dalab 18 T&C
105 Tigidhada Free & 10 dhigeeysa free 18 T&C
40£ Bonus & 100 dhigeeysa free 18 T&C
30£ Bonus Welcome 18 T&C
500 dhigeeysa Free 18 T&C
50£ Bonus Welcome 18 T&C
300% Bonus deposit First 18 T&C
300% Bonus Welcome 18 T&C
120 Tigidhada bingo 18 T&C
200% Bonus Welcome 18 T&C
180 dhigeeysa Free 18 T&C
20£ Bonus & 20 dhigeeysa 18 T&C
DHEERAAD AH TUS
XULASHADA CIYAARTOYDA SOOMAALIYA
64 Bingo tigidhada & 10 dhigeeysa free
64 Tigidhada Free bingo & 10 dhigeeysa free
300% Bonus & 30 dhigeeysa free
40£ Bonus Welcome
Goobaha Bingo ee ugu Fiican Julay 2022
Ku soo dhawoow liiska goobaha bingo bogga ugu fiican, abuuray by Bingo77somalia.com. Hoos waxaad ka heli doontaa soo baxay doorashada ee magac TOP bingo ciyaartoyda Soomaali. Isbarbardhigga gunooyinka bingo, dooran ikhtiyaarka ugu fiican iyo sii wadi in lagu dheelo ciyaaraha online bingo.
Shabakadaha Internetka ee bisha
Ciyaar Dib u eeg
Isku day qaar ka mid ah kulan for free
Sidee loo ciyaaraa bingo?
Bingo waa ciyaar "nasiib wacan". Martigaliyaha ciyaarta (loo yaqaan "wace") si aan kala sooc lahayn ayuu u soo jiitaa lambarada guuleysta ee la xushay. Ciyaartoyda waa inay isku beegaan tirooyinkaan guuleysta iyo kuwa ku daabacan qaabab kala duwan kaararka 5 × 5 ee ay leeyihiin. Haddii lambarada guuleysta loo diyaariyo kaararkooda qaab saf gudban, waxay ku dhawaaqaan "Bingo!". Maalmahan sidoo kale waa suurtogal in lagu ciyaaro bingo-da onlaynka ah goobo badan oo bingo ah Soomaaliya.
Waa maxay App-ka Bingo ee ugu fiican Soomaaliya?
Waxaad ku cayaari kartaa ciyaaraha bingo lacag ama lacag la’aan. Arinka dambe waxaad dooran kartaa oo aad kala soo bixi kartaa barnaamijyo ay dadwaynuhu galaan u leeyihiin. 5-ta app ee ugu SARREEYA bingo ee loogu talagalay Android waxaa ka mid ah Bingo Gem Rush, Super Bingo HD, Bingo Blitz, Lucky Bingo iyo Bingo Heaven. 5-ta app ee ugu SARREEYA ee loogu talagalay iOS ayaa ah Robin Hood Bingo, Moon Bingo, Ted Bingo, Sugar Bingo iyo Polo Bingo.
Maxay yihiin noocyada ciyaaraha ciyaarta bingo?
Waxaa jira laba nooc oo kaararka Bingo ah. Shabagga 5x5 waxaa loo isticmaalaa inuu u ciyaaro Bingo-da 75-ka kubbadood iyo shabagga 9x3 waxa loo isticmaalaa "Housie" ama Bingo-da 90-ka kubbadood. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kala-saaritaan dheeri ahcayaaraha bingo. Sidaas darteed, waad ka aqrin kartaa oo ku ciyaari kartaa Bingo U-Pick Them (halkii bakhtiyaa-nasiibka ah), Bingo Bonanza (oo leh lambarro 43 ah), Stallion Race Bingo (oo leh lambarro min 1 ilaa 15 iyo ilaa 15 ciyaartoy ah), Passing Bingo (ciyaartoyga ugu dambeeya ee taagan ayaa guulaysta), 30 Ball Bingo (waxay ka kooban tahay 30 kubbadood oo bingo ah) iyo Coverall Bingo (halkii daloolka). Ciyaartoygu waxay ka dooran karaan noocyada kala duwan ee kuwan ah tiro goobaha bingo-da Soomaaliya waxayna ku ciyaari karaan labadaba lacag la’aan ama lacag.
Ma aaminbaa in lagu ciyaaro bingo-da onlaynka ah Soomaaliya?
Bingo-da onlaynka ah wuxuu noqon karaa nooc nasasho ah oo gebi ahaanba badbaado iyo ammaan ah haddii ciyaartoygu raaco shuruucdan kooban ee fudud. Hubi haddii goobta bingo leedahay liisan isla markaana hubso in ay u dhiganto sharciga khuseeya ee Soomaaliya. Sidoo kale si looga hortago khasaaraha lacageed ee aan la filaynin waxaan kula talineynaa ciyaartoydu inay laba-hubiyaan Shuruudaha & Qodobada la-bixitaannada gunnooyinka bingo 'bingo iyo sharatamidda khamaar onlayn ah oo gaar ah oo kasta.
Talinayo by Bingo 77
Tigidhada Free bingo & 10 dhigeeysa free
Dooro dalka Nala soo xiriir